Nchịkọta oge oyi: Ezi ntụziaka iji mechaa menu kwa izu | Bezzia
Nchịkọta oge oyi: Ezi ntụziaka iji mechaa menu gị kwa izu
Kwa izu na Bezzia anyị na-atụ aro abụọ Ezi ntụziaka ndị nwere ike inyere gị aka mezue menu gị kwa izu. Ezi ntụziaka dị iche iche, ka unu niile nwee ike ịchọta echiche ndị nwere ike ime ka mkpa gị na ego gị dị. Enweela ọtụtụ narị atụmatụ n'ime afọ ndị a, zuru ezu iji mepụta menu oyi maka ọtụtụ izu.
Inye ihe kacha mkpa na anyị na-ahụ n'oge oyi oge na-ekwe ka anyị onwe anyị na-eduzi ndị pyramid nri, anyị emepụtala a menu kwesịrị ekwesị maka ụbọchị isii Ọ na-ekpuchi nri abụọ maka nri abalị. Gịnịkwanụ banyere nri ụtụtụ? Ọ bụrụ na anyị atụnyere gị ụfọdụ nri ụtụtụ. Ha bụ naanị amụma, cheta na ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ntụziaka ndị ọzọ site na iji search engine anyị.
1 Daybọchị 1
2 Daybọchị 2
3 Daybọchị 3
4 Daybọchị 4
5 Daybọchị 5
6 Daybọchị 6
Ọ na-amasị gị ka nri ụtụtụ gị dị iche iche? Anyị na-agba gị ume ka ị gbalịa na-esonụ amụma: porridge na almond na banana ude, ugu na pawuda porridge, toast na ube oyibo na scrambled egg, apple achicha na walnuts na mịrị, zucchini achicha na-enweghị shuga, banana achicha, chocolate na walnuts , enweghị shuga. kuki almond na-enweghị shuga ... naanị ị ga-achọ ha n'etiti ntụziaka anyị wee gbanwee ya!
Maka nri nke otu ụbọchị anyị ahọrọla maka ya legumes dị ka isi nri, ezinụlọ nri nke na-eburu otu mbụ nke pyramid nri. Anyị nwere ike iche ọtụtụ efere legume, mana anyị ahọrọla otu n'ime ọkacha mmasị anyị. chickpea stew na prawn. Iji mechaa nri ahụ, naanị ihe ị ga-eme bụ itinye a salad dị mfe nke gụnyere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na mkpụrụ osisi. Na maka nri abalị? Hake fillet na ude zukini.
Amaghị m n’ụlọ unu, ma n’ọtụtụ ụbọchị anyị ka unu na-eri otu efere. Na osikapa ma na tofu na inine o cod na kọlịflawa, dị ka anyị na-atụ aro taa, o yiri ka anyị a oké ọzọ. Cheta ịkụ nzọ na osikapa agba aja aja bụ nhọrọ ka mma, ha na-atụnyekwu eriri nri na nri anyị.
Ma dị ka taa bụ maka efere pụrụ iche, anyị na-atụ aro nke ọzọ maka nri abalị: agwa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ham na ugu puree. Ị nwekwara ike ijere ya ozi dị iche iche, n'ezie, mana m na-emesi gị obi ike na ngwakọta ahụ bara uru.
Ụfọdụ meatballs na ugu ihendori ha na-aghọ isi nri anyị n'ụbọchị nke atọ. Uhie anụ Ha na-ebi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'elu pyramid nri n'ihi nnukwu ọdịnaya nke abụba juru eju, yabụ oriri ha kwesịrị ịdị oke oke. Na menu anyị, nke a ga-abụ naanị ụbọchị ha ga-abụ ndị na-eme ihe nkiri yana ihe dị mfe akwụkwọ nri, ube na salad beets.
Na maka nri abalị, efere na-ejikọta nri sitere na otu dị iche iche na nke dị mfe ịkwadebe: Nsacha nchara na poteto na zukini na prawns. Nhọrọ dị mma iji tinye zukini ma ọ bụ aubergine na nri ụmụaka.
Pasta bụ otu n'ime atụmatụ ọkacha mmasị nke ezinụlọ. Na ndị a akwụkwọ nri na cheese cannelloni ha bụ nzọ dị mma. Ya na a ude ọkụ dị ka mmalite, nke kabeeji na apụl, dịka ọmụmaatụ, ị ga-eme nri ahụ. Na maka nri abalị? Ị naghị amasị ụfọdụ apata apata ụkwụ ọkụkọ?
Ụbọchị ọzọ nke efere pụrụ iche. Nri na-akasi obi, dị mkpa na menu oyi, nke ga-eme ka ị kpoo ọkụ ngwa ngwa. Iri a Nduku stew na akwụkwọ nri. Ị nwere ike ịhọrọ n'etiti a Nduku na kọlịflawa stew na-acha akwụkwọ ndụ ihendori ma ọ bụ otu n'ime poteto na broccoli curry. Tinye na oghere esiri esi nke ikpeazụ dị ka nke mbụ, ị ga-enwe efere iri.
Maka nri abalị anyị na-amalite a ofe osikapa nke ị nwere ike ịgbakwunye, dị ka anyị mere, hake ma ọ bụ azụ ọ bụla ọzọ.
Anyị enweghị ike itinye na menu a sie ma ọ bụ skillet azụ. Ị nwere ike ịhọrọ n'etiti otu ọla edo omenala o na chermoula, ma ọ bụ ọ bụrụ na-amasị gị a salmon pan. Na-eso ya ma ghara imebi na kabeeji na ị na-ejiworị ụbọchị ole na ole tupu ịkwadebe ude, kedu banyere iso azụ na a. kabeeji garlic?
Maka nri abalị anyị na-alaghachi na mkpo ọka, ma anyị na-enye ha n'ụzọ dị nnọọ iche, n'ụdị croquette. Dị ka ya falafel omenala dị ka biiti ma ọ bụ akwụkwọ nri ha bụ ezigbo nhọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Nri » Nchịkọta oge oyi: Ezi ntụziaka iji mechaa menu gị kwa izu
'Ma dị ka nke ahụ' Ọga n'ihu nke ' Mmekọahụ na Obodo '